NGABA 'AMATHAMBO ATHANDEKAYO' ASEKWE KWIBALI LOKWENENE? - INETFLIX
Ngaba 'Amathambo Athandekayo' Asekwe Kwibali Lokwenene?
U-Saoirse Ronan ubambe igama lakhe lesibini le-BAFTA lokudlala indawo kwi-Peter Jackson's 2009 thriller Amathambo aLuthando -Kwaye yena wayeneminyaka nje eyi-16 ukusebenza kakuhle kuka-Ronan njengo-Susie Salmon, umfazi omncinci ojonge umzi wakhe kwindawo yentlambululo-miphefumlo, ephawule impumelelo enkulu ngaphakathi kobungcali bomdlali weqonga. Umboniso bhanyabhanya uqikelelwa kwinoveli kaAlice Sebold yesihloko esifanayo; Nangona kunjalo isekwe ikakhulu, nangayiphi na indlela, kwibali eliyinyani?
Amathambo aLuthando Ulandela uSusie, umfazi omncinci obuleweyo ohamba esiya kwindawo yentlambululo-miphefumlo emva kokubhubha kwakhe. Njengokuba ejonge umzi wakhe, kufuneka abone ukuba yintoni eyongezelelweyo eyimfuneko kuye: ukuthanda kwakhe indlu yakhe, okanye impindezelo yakhe ngokuchasene nombulali wakhe. Ukuba ufuna indlu yakhe ukuba iphilise, uSusie kufuneka axolele isenzo sombulali wakhe aze adlulele kubomi basemva kobomi.
Umboniso bhanyabhanya othile uvela ngathi ngumfanekiso bhanyabhanya omnandi, ngenxa yoko unokubonakala ngathi ibali lokwenyani lalikude nedesika. Kodwa impendulo inokukothusa kakhulu, ukusebenzisa ibinzana lewebhu ukusuka ku-2015. Nantsi yonke into onokuyazi malunga nebali eliyinyani kwi Amathambo aLuthando :
Ngaba Amathambo aLuthando esekwe ikakhulu kwibali eliyinyani?
Ewe-ifom ye-. Umxholo webali wasemva kokufa, awathi ngawo uSusie wajonga indlu yakhe kwindawo yentlambululo-miphefumlo, awuyonyani. Kodwa umyili owahlukileyo wesikhokhelo, u-Alice Sebold, wavuma ukuba eli bali ngokuyinxenye lalisekwe ikakhulu kudlwengulo nokubulawa komfazi omncinci eNorristown, ePennsylvania, owaxhwilwa kuyise nakumama wakhe kwisithuba samashumi asixhenxe anesixhenxe.
Ngelixa wayelibhala eli bali, u-Sebold wathi uza kuzibeka kwinqanaba lomfazi omncinci, afune ukuhla endlwini yakhe kwilizwe lasemva komhlaba. USebold ngokwakhe wabona isiganeko esihambelana noko. Ngo-1981, umdali wahlaselwa kwaye wadlwengulwa, kodwa wakwenza ukuba aphile ukubalisa ibali lakhe .
Iphi i Amathambo aLuthando usasazo?
Amathambo aLuthando yongezwe kwiNetflix kwangoko ngoMeyi, ngethamsanqa! Ukuba uzama ukusasaza i-thriller, yiya phambili kwi-Netflix.
ndingabujonga phi ububi kungekuko okubi nje
Ngaba Amathambo aLuthando phaya ngaphandle ukuze uqeshise / uthenge kwi-VOD?
Ukuba ufuna ikopi yakho yobuqu Amathambo aLuthando , unethamsanqa. Unokuqeshisa imovie ukuqala nge- $ 2.99 okanye uyithenge ukuqala nge $ 7.99 ngaphezulu kwi Dlala kuGoogle , iTunes , IMicrosoft , Inkulumbuso yeVidiyo , Vudu , okanye Youtube .
Anna ubudala obungakanani
isithsaba sendawo yekrisimesi yefilimu
I-rick fox ebonisa iifilimu
angie kunye nokumakisha ezihambelana noko
ngubani ophumelele i-hoh kumzalwana omkhulu izolo ebusuku
Ngubani ixesha emmys